श्वेता र विजयन्द्र कति समयदेखि थिए प्रेममा ? कसरी भेटेकी थिइन् श्वेताले श्रीकृष्णपछि प्रेमिका रुपमा विजयन्द्रलाई ? – Gazabkonews
श्वेता र विजयन्द्र कति समयदेखि थिए प्रेममा ? कसरी भेटेकी थिइन् श्वेताले श्रीकृष्णपछि प्रेमिका रुपमा विजयन्द्रलाई ?
काठमाडौं । अभिनेत्री श्वेता खड्का फेरि वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएकी छिन् । अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठ दिवंगत भएको ६ वर्षपछि उनी पुनः दाम्पत्य सम्बन्धमा बाँधिएकी हुन् ।
आफ्ना प्रेमी विजयन्द्र सिंह रावतसँग उनले सोमबार दिउँसो हिन्दु परम्पराअनुसार विवाह गरेकी हुन् । विजयन्द्र र श्वेता विगत एक वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए । एउटा कार्यक्रममा भेट भएपछि उनीहरु निकट भएका थिए ।
आफूहरुका एक वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई उनीहरुले दाम्पत्य सम्बन्धमा सोमबार परिणत गरेका छन् । यसअघि अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग दाम्पत्य सम्बन्धमा बाँधिएकी श्वेताले विवाहको ४० दिन नपुग्दै आफ्ना पतिलाई गुमाएकी थिइन् । त्यसपछि उनले आज ९सोमबार० दोस्रो विवाह गरेकी हुन् ।
काठमाडौंको गोकर्ण रिसोर्ट विवाहका लागि बुक गरेकी अभिनेत्री श्वेताले विवाहका विभिन्न रीतिरिवाज चार दिनयताबाट सम्पन्न गरेपछि मात्र सोमबार विवाह गरेकी हुन् । विवाह समारोहमा अभिनेत्री श्वेता र विजयन्द्रका परिवारका सदस्य उपस्थित थिए । विवाहमा यी दुईले आफ्ना सीमित साथीभाइ र केही सञ्चारकर्मीलाई बोलाएका थिए । अभिनेत्री श्वेताले सिनेकर्मीदेखि साथीभाइलाई प्रीति भोज छुट्टै आयोजना गर्ने भएकी छिन् ।
श्वेतासँग दाम्पत्य सम्बन्धमा बाँधिएका विजयन्द्र सिंह रावत सुदूरपश्चिमको धनगडीवासी हुन् । आफू र श्रीमती श्वेताको कोठामा दिवंगत अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको फोटो राख्न श्वेताले पाउने सर्तमा उनले विवाह गरेका छन् । राजधानि दैनिकमा खबर छ । उनी परिवारका कान्छा छोरा हुन् । अब पढाइ सकेर उनी पनि चाँडै व्यवसायमा सक्रिय रूपमा आउने भएका छन् । उनका परिवार सबै व्यवसायमा छन् । अभिनेत्री श्वेता पनि इन्टेरियर, होटल र रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा आबद्ध छिन् ।
एक दशकअघि श्वेताले श्रीकृष्ण श्रेष्ठ निर्मित तथा अभिनित चलचित्र ‘कहाँ भेटिएला’बाट नेपाली चलचित्रमा नायिकाका रूपमा अभिनय यात्रा सुरु गरेकी थिइन् । चार वर्षको प्रेम सम्बन्धपछि उनीहरुले विवाह गरेका थिए । विवाहको ४० दिन नपुग्दै अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधन भएको थियो । त्यसपछि ६ वर्षसम्म एक्लै बसेकी श्वेताले सोमबार दोस्रो विवाह गरेकी हुन् ।
कहाँ भेटिएला पछि श्रीकृष्ण र श्वेताले श्रीमान् श्रीमती र कोहिनुर गरी दुई ओटा चलचित्रमा सँगै नायक नायिकाका रूपमा अभिनय गरे । श्वेताले उनको सम्झनामा दुई वर्षअघि चलचित्र कान्छी निर्माण गरेकी थिइन् । अभिनेत्रीका रूपमा आफ्नो परिचय बनाएकी श्वेताले दोस्रो विवाहपछि पनि चलचित्र अभिनय र निर्माणलाई निरन्तरता दिने बताएकी छिन् ।